OnePlus, Meizu na ndi ozo sonyere Njikwa Nyefee Alliance | Gam akporosis
Gịnị bụ Njikwa Nyefee Alliance: OnePlus, Meizu na ndị ọzọ sonyere Xiaomi, OPPO na Vivo
Ọ bụrụ na Samsung enweela "Airdroid" gị na Google na-arụ ọrụ na nke gị, OnePlus, Meizu, Realme na Black Shark sonyere Xiaomi, OPPO na Vivo na Njikọ Nyefee Alliance. Ihe niile na-ada ụda nke ukwuu ma ọ bụ ya mere, ebe ndị buru ibu na-ezukọta maka usoro mbufe iji nyefee faịlụ ngwa ngwa.
Ugbua n'ọnwa Ọgọstụ, ha bụ ndị atọ mbụ, Xiaomi, OPPO na Vivo, hibere njikọ aka na na-enye ihe “Airdroid” ahụmahụ na gburugburu ebe obibi gam akporo; Karịsịa maka ekwentị ndị ahụ dị ala na nke etiti na-emerụ ahụ nke ukwuu mgbe ekwentị ndị ahụ dị elu na-enye ngwọta siri ike ma na-arụ ọrụ nke ọma. Gaa maka ya.
1 Gịnị bụ Njikwa Nyefee Alliance
2 Mgbanwe nke teknụzụ a maka nde mmadụ 400
Gịnị bụ Njikwa Nyefee Alliance
Mgbe ọtụtụ ndị na-emepụta China na-ezukọta, enwere ihe pụrụ iche na njikọ a na nke na-ebupụta ya na ihe pụrụ iche. Ma ọ bụrụ na anyị na-ama mara na dabere na ụkpụrụ P2P maka mbufe faịlụ, ọ karịrị ihe pụrụ iche. Ihe omuma nke usoro a bu “mmadu” ebe obu na anyi n’ezo aka ihe di nkpa ndi mmadu iji kerita ma obu “ahia” nke ndu niile. M na-eme mma na ị na-egbute poteto, n'ọnọdụ m ị nyere m poteto na ọ bụ mmeri mmeri maka anyị abụọ (na-achọsi ike etu anyị si akpọ ọrụ ndị a anyị na ha nọ kemgbe ọtụtụ narị afọ na narị afọ).
Nke a «Alliance» Ọ bụ Xiaomi, OPPO na Vivo malitere ya n’oge ọkọchị gara aga. Ma n'ọnwa Febụwarị gara aga ka a tọhapụrụ ya tụrụ mmadụ niile n'anya. Ihe omume a dabere na usoro mbufe faịlụ P2P na jiri Bluetooth LE ịmepụta njikọ wee si otú nyefee ọsọ ọsọ ruru 20MB kwa nke abụọ.
Taa, anyị maara na esonyela njikọ a ọzọ nke nnukwu aha Asia dị ka OnePlus, Meizu, Realme na Black Shark. Yabụ, ihe na mbụ bụ a "nzukọ nke ndị ọrụ ibe", na-na-ewere ọzọ uzo na ihe yiri ka ọ bụ solidifying; Obi dị anyị ụtọ na ịchọghị naanị gị niile dịka enwere ọtụtụ ndị na - eme ihe nkiri na - emezi ihe ngwọta ha ma anyị na - anụ ụtọ ha.
Mgbanwe nke teknụzụ a maka nde mmadụ 400
Ya mere, ekele maka njikọ a, ndị a niile ga-enwe ike ịkekọrịta faịlụ na-enweghị mkpa maka ngwa ndị ọzọ. Otu a na-ekwu na ha ga-erite uru banyere 400 nde ndị ọrụ n'ụwa nile.
Intoga zuru ezu banyere teknụzụ a P2P dabeere na ya, ọ na-enye nkwado maka ọtụtụ faịlụ faịlụ yana ọbụlagodi na-enye ohere ịkekọrịta folda niile n'etiti ndị ọrụ. Dị ka anyị kwuru, ọsọ ndị a na-ebufe faịlụ ndị ahụ bụ 20MB kwa nke abụọ n'okpuru njikọ dị jụụ.
Ugbu a anyi amaghi ozi obula OnePlus, Realme na Meizu weputara ihe ụbọchị ga-abịa ọhụrụ a ike ịkọrọ faịlụ na ha igwe A naghị atụ anya na ọ ga-ewe ogologo oge n'ihi na ọ dịlarị n'ime atọ ndị mbụ, ya mere enwere ike ịfefe folda niile ngwa ngwa site na usoro P2P nke na-enye anyị ọtụtụ ọysụ mgbe niile; ọ bụ ezie na a na-awakpo ya mgbe ụfọdụ site na ụfọdụ oghere ndị na-enweghị mmasị n'ụzọ a magburu onwe ya nke ibudata na ibudata faịlụ.
Ihe dị mkpa ga-abụ Google ga-awụli elu na bandwagon ma webata ikike a na gam akporo,, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ dị anya site na ebumnuche ya mgbe o nweelarị teknụzụ "airdroid" ya maka mobiles ya. N'ezie, ọ bụrụ otú ahụ, o doro anya na ọ ga-abụ ọkọlọtọ maka ngwaọrụ gam akporo.
Anyị ga-ahụ otu ihe niile si dị kemgbe Njikọ nyefe faịlụ dị ka ọ ga-adị mkpa karịa maka 400 nde ndị ọrụ n'ụwa nile. Chei ihe ha na-akwadokwa Google Play Store ha nke mbụ, yabụ ihe niile dabara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Gịnị bụ Njikwa Nyefee Alliance: OnePlus, Meizu na ndị ọzọ sonyere Xiaomi, OPPO na Vivo
Ndị na-awakpo ndị na-awakpo ndị ọhụụ bụ ndị na-egbu arahụ na ọtụtụ ụmụ ahụhụ igbu
Ya mere ị nwere ike ijikwa ọsọ ofntanetị nke ngwaọrụ ndị ejikọrọ na Wi-Fi gị